अटोमोबाइल इन्जिनियरिङमा करिअर सोच्‍नुभएको छ ? गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयबारे बुझ्नुस् | Pokharama
Home Education अटोमोबाइल इन्जिनियरिङमा करिअर सोच्‍नुभएको छ ? गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयबारे बुझ्नुस्
प्राविधिक शिक्षा । प्रतीकात्मक चित्रः shutterstock
अटोमोबाइल इन्जिनियरिङमा करिअर सोच्‍नुभएको छ ? गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयबारे बुझ्नुस्
पोखरा महानगरपालिकाले बजारको मागका आधारमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य सहित ‘गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय’ स्थापना गरेको छ । शिक्षालयमा यसै वर्षदेखि ‘डिप्लोमा इन अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ’ र ‘डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ’को तीन वर्षे कोर्षको पठनपाठन सञ्चालन हुनेछ ।
अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी आवश्यक सीपको अभावमा यहाँका युवा बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा महानगरपालिकाले यस क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ ती विषयमा अध्यन अध्यापन सुरु गर्न लागेको हो । महानगरले प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बाट सम्बन्धन लिएर वडा नं २९ भण्डारढिकमा स्थापना गरेको बहुप्राविधिक शिक्षालयबाट प्राविधिक विषयमा अध्यापन हुनेछन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र विकास भएको क्षेत्रमा अटोमोबाइल पर्दछ । स्वदेशभित्रै गाडीका पार्टपुर्जा तथा उपकरणहरूको उत्पादन नभएपनि छिमेकी मुलुकबाट आयात हुन्छ । गाडी तथा यसका पार्टपुर्जाको आयातसँगै यसको मर्मत सम्भारको काम गर्ने अधिकांश जनशक्ति समेत विदेशी नै छन् । उच्च रोजगारी प्राप्तिको क्षेत्र भएपनि देशभित्र सो कामका दक्ष जनशक्ति नहुँदा ठूलो धनराशी बाहिरिएको छ ।
सिभिल इन्जिनियरिङ अधिकांश प्राविधिक शिक्षालयहरूमा पढाइ हुने भएपनि अटोमोबाइल पढाइ हुने कलेज तथा क्याम्पसहरू नगण्य छन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा केही वर्ष अघि अटोमोबाइल विषय अध्यापन गरिएपनि पनि हाल सो विषयको पठनपाठन हुँदैन । सिटिइभिटीले विद्यार्थी भर्नाका लागि आवेदन खुलाउने र उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई शिक्षालयमा अध्यापन गरिने महानगर शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले बताए । उनका अनुसार दुवै विषयमा ४८/४८ सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छ जसमा एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थीले आवेदन गर्न सक्नेछन् । कोभिड संकटको अवस्था हेरेर आगागी दशैँपछि कक्षा सुरु गर्ने तयारी छ ।
महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले सबैभन्दा बढी रोजगारी प्राप्तिको क्षेत्रमा सँधै परर्निभर बन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अटोमोबाइल क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । उनले आगामी दिनमा पर्यटन, वन, कृषि, लगायत बजारको मागका आधारमा अन्य विषयका कक्षाहरु समेत थप गर्दै योजना अनुसार बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिएको बताए । उनले भने,“सँधै परनिर्भर भएर पैसा बाहिर पठाएर यहाँका मान्छे बेरोजगार बस्नुको अर्थ छैन, अटो मोबाइलवालाहरूलाई समेत आफूलाई चाहिने जनशक्ति लगानी गरेर पढाउ भन्ने हो,रोजगारको सुनिश्चिता गरेपछि मान्छे पढ्न आउलान् भन्ने छ ।”
यस वर्ष पहिलोपटक दई विषयमा प्राविधिक विषय अध्यापन गरिएपनि शिक्षालयको पूर्वाधार निर्माणपछि प्राविधिक धारका कक्षाहरू समेत थप गर्दै शिक्षालयलाई प्राविधिक शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने योजनाका साथ महानगरपालिका अघि बढेको उनले जानकारी दिए । विद्यार्थी कोटा निर्धारण,छात्रवृत्ति तथा भर्ना शुल्क तय गरिसकिएको महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए । खुलामा देशभरिका विद्यार्थीले न्यून शुल्कमा पढ्न पाउँछन् भने महानगरवासीलाई केही कोटा निर्धारण गरिएको र सोही अनुसार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति समेत प्रदान गर्ने योजना छ ।
सिभिल इन्जिनियरिङका लागि तीन वर्षको एक लाख ९५ हजार रुपैयाँ शुल्क छ भने अटोमोबाइलको एक लाख ७५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । आफ्नै पूर्वाधार नबन्दासम्म सुरुआतमा महानगरले जनप्रकाश माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । प्राक्टिकलको लागि पश्चिमाञ्चल क्याम्पससँग सम्झौता गरिएको भएको उनले जानकारी दिए ।
“पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म हामीले जनप्रकाश माविमा पढनपाठन गर्दछौँ, राम्रो ल्याब भएकाले प्राक्टिकल पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा हुन्छ”, उनले भने । प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालका लागि महानगर प्रमुख जिसीको संयोजकत्वमा ६ सदस्सीय सञ्चालक समिति बनेको छ ।
निर्देशकका लागि विज्ञापन
त्यसैगरी शिक्षालय निर्देशकका लागि विज्ञापन गरिएको छ । महानगरको सहरी योजना आयोगका आर्किटेक्ट बाबुराम भण्डारीको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक सिफारिस समितिले केही दिनमा निर्देशक पदपूर्तिका लागि महानगरमा सिफारिस गर्नेछ । अटोमेकानिकल वर्क्स एशोसिएसनका अध्यक्ष सानुमान जलारीले अटोमोबाइलको जनशक्ति जिल्लामा अभाव रहेको बताए । यस विषयको अध्यापनबाट दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुने र मागको पूर्ति हुने उनको भनाई छ । रासस
Gandaki Technical Institute
Previous articleपोखरामा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पर्यटकीयस्थलका सूचना विभिन्‍न भाषामा
Next articleयसरी छोपिएला त पोखराको लाज ?